प्रभासले गरे ६ हजारबढी विवाह प्रस्तावको अस्वीकारः चाहने युवतीहरु कति छन् ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood प्रभासले गरे ६ हजारबढी विवाह प्रस्तावको अस्वीकारः चाहने युवतीहरु कति छन् ?
चलचित्र ‘बाहुबली’मा अभिनयको जादु देखाएका अभिनेता प्रभासका फ्यान सो चलचित्रपछि ह्वात्तै बढे । उनलाई चाहने युवतीको संख्याको चार्ट पनि निकै उचाइमा पुग्यो । ३६ वर्षीय अभिनेता प्रवासले कोसँग आफ्नो पे्रम साट्लान् भन्नेचाहिँ कौतूहलको विषय बन्यो । धेरैले ‘बाहुबली २’ लगायत अन्य थुप्रै चलचित्रमा स्क्रिन सेयर गरेका प्रवास र अभिनेत्री अनुष्का सेट्टीको प्रेम भएको अनुमान लगाए । धेरैभन्दा धेरै फ्यान प्रवास र अनुष्का एक भएको हेर्न चाहन्छन् ।
चलचित्रका एक सदस्यले अनुष्का र उनको डिसेम्बरमा विवाह हुने हल्ला फैलाइदिएका थिए । इन्डिया डट कम नामको एक अनलाइनले पनि उनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न लागेको बताएको थियो । उनीहरूले डिसेम्बरमा विवाह गर्न लागेको र यसको औपचारिक घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको हल्ला चले पनि उनीहरू भने मौन थिए ।
६ हजारवटा विवाहका प्रस्ताव अस्वीकार गरेका प्रवासले धेरैले मन पराउँदा आफूले भाग्यमानी महसुस गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै हालसालै विवाह गर्ने योजना नभएको पनि जानकारी दिए । उनले विवाहसम्बन्धी फैलिएका खबरलाई सामान्य मान्दै यस्ता हल्लाले आफूलाई फरक नपार्ने बताए,अन्नपुर्णले लेखेको छ । प्रवासले भने, ‘कुनै अभिनेत्रीसँग दुईवटाभन्दा धेरै फिल्ममा काम गरेपछि मान्छेहरू हिरोहिरोइनको सम्बन्ध भएको हल्ला फैलाउन थाल्छन् ।’ यस्ता हल्लाले आफूलाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए ।
प्रवास र अनुष्काका फ्यानले उनीहरूलाई एउटा उत्कृष्ट जोडीका रूपमा हेर्दै आएका छन् । दुवैले यो खबरमा सत्यता नभएको बताएका छन् । उनी आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू एकदमै गोप्य राख्न चाहन्छन् । उनलाई व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक गर्ने रुचि छैन । विवाहको हकमा भने लगन जुरिसकेपछि सार्वजनिक गर्ने सोचमा छन् । उनीहरूले केही दिनअघि हैदराबादमा एक पार्टीमा समय बिताएका थिए ।
प्रवास यति बेला ‘साहो’ नामको चलचित्रमा काम गरिरहेका छन् । उनको विपरीत भूमिकामा अनुष्काले काम गर्ने भनिए पनि प्रोजेक्ट श्रद्धा कपुरको हातमा परेको छ ।